Linux Mint vs Ubuntu. Iza amin'ireo no tiako? | Ubunlog
Paul Aparicio | | Birao hafa, Unity
Betsaka ny fizarana ny rafitra miasa Linux ary misy ny tsiro ofisialy hatramin'ny 10 raha toa ka manisa ny kinova voalohany isika. Ny rafitra mifototra amin'ny Ubuntu dia afaka mametraka rindrambaiko mitovy amin'ny alàlan'ny baiko mitovy amin'ny terminal sy ny Software Center. Ny fiovana dia ny rindrambaiko napetrak'izy ireo amin'ny alàlan'ny toerana misy anao sy ny tontolon'ny sary. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, anio dia hametraka isika mifanatrika amin'ny Linux Mint vs Ubuntu, iray amin'ireo kinova malaza indrindra miorina amin'ny Ubuntu, indrindra ho an'ireo solosaina tsy manana fitaovana voafetra.
Satria samy manana ny ao anatiny ny rafitra roa, dia mila miorina amin'ny teboka sasantsasany toa ny endrika, ny programa napetraka na ny tontolo sary voalaza etsy ambony isika. Misy ihany koa zavatra mety ho manan-danja ihany koa, miankina amin'ny solosaina izay tiantsika hampiasana azy, ary izany no izy fahaiza-mitantana, tsy fahatokisana, fizarana izay samy mitondra tena amin'ny fomba miavaka.
1 Misintona sy mametraka
3 Sary sy endrika
4 Fandaminana sy fanamorana ny fampiasana
5 Fandaharana napetraka
6 Famaranana: Linux Mint vs Ubuntu
Misintona sy mametraka
Samy mizara amin'ny fomba tsotra sy mitovy ny fizarana roa. Mila fotsiny ampidino ny ISO amin'ny iray amin'ireo kinova (avy amin'ny HERE Edubuntu's ary avy HERE UberStudent's), mamorona pendrive fametrahana (atoro) na hodorana amin'ny DVD-R, atombohy ny PC izay tianay hapetraka amin'ny DVD / Pendrive napetraka ary apetraka ny rafitra tahaka ny ataonay amin'ny kinova Ubuntu hafa. Amin'ny ankapobeny, ny solosaina rehetra dia mamaky ny CD aloha ary avy eo ny kapila mafy, koa raha ny hampiasa pendrive no safidintsika dia tsy maintsy manova ny baiko bootin'ny BIOS isika. Amin'ireo tranga roa ireo dia azontsika atao ny manandrana ny rafitra na mametraka azy.
Azo antoka izany ny teboka manan-danja indrindra amin'ny sanda amin'ity fampitahana ny Linux Mint vs Ubuntu ity.
Izaho izay nampiasa Ubuntu nandritra ny folo taona, dia nahatsikaritra fa ny tontolon'ny sary Ny firaisam-po dia nahatonga ny solosainako hiadana be solosaina finday. Tsy afaka milaza aho fa ratsy na tsy azo itokisana ny rafitra, saingy very haingana be izany, indrindra rehefa manokatra rindranasa toa ny Software Center. Ary koa, ny fahitana ireo varavarankely volondavenona rehefa eo am-pamolavolana ny rafitra dia nahatonga ahy hieritreritra fa tsy niasa tamin'ny solosainako ambany loharano ilay rafitra.
Etsy ankilany, samy kanelina sy MATE dia tontolon'ny sary maivana, indrindra ny faharoa. Ho an'ny hafainganam-pandeha sy hakingana fotsiny, Linux Mint dia mikapoka an'i Ubuntu amin'ity fizarana ity.
mpandresy: Linux Mint (MATE).
Sary sy endrika
Mikasika ny famolavolana, heveriko fa tena mifamatotra ny zava-drehetra. Ubuntu mampiasa Unity, tontolo iray izay tiako bebe kokoa hatrany, saingy tsy maintsy ekena fa sarotra amiko ny mahita ireo rindranasa, na dia ilaina aza ny manonona fa afaka mitady zavatra rehetra ianao (ao anatin'ireo fampiharana tafiditra ao, toa ny safidinao) amin'ny alalàn'ny manindry ny bokotra Windows ary manomboka manoratra. Ho an'ny zavatra hafa rehetra, ny sary masina sy ny fikandrana fampiharana dia toa mitovy amin'ny roa (na telo, araka izay hazavainay) système d'exploitation, fa mieritreritra aho fa manana ny hatsarany ny Unity.
Linux Mint dia misy karazany roa. Ny kinova miaraka amin'ny tontolon'ny sary VADIKO mitovy be amin'ny Ubuntu izy mandra-pahatongan'ny fahatongavan'ny tontolon'ny sary Unity tamin'ny 2011. MATE dia manana sary tsy mitandrina kokoa izay mampahatsiahy ahy, amin'ny lafiny sasany, ny Windows 95, saingy manintona kokoa noho ny fijeriko noho ity manaraka ity.
Azo alaina ao amin'ny kinova misy tontolo iainana sary koa io kanelina. Ity tontolo misy sary ity dia manana sary manintona kokoa noho ny MATE fa isaky ny nampiasa azy aho dia tsy naharesy lahatra ahy. Raha mila misafidy aho dia hifikitra amin'ilay kinova MATE. Ary tsia, ny sary roa teo aloha dia tsy mitovy.
Fandaminana sy fanamorana ny fampiasana
Ny fahatsoran'ny fampiasana heveriko fa zavatra mitombina ihany koa na dia hojerentsika aza ny fampitahana ny Linux Mint vs Ubuntu.
Ho an'ireo mpampiasa izay ampiasaina amin'ny Windows, mety ho hitanao fa mora kokoa ny mampiasa Linux Mint Ao amin'ireo kinova misy azy dia asehon'i Cinnamon ny menio Start mitovy amin'ny fomba anehoan'ny Windows XP, Vista ary 7 azy amin'ny alàlan'ny default ary ny Mate dia mitovy amin'ny Start Start.
Ny kinova roa an'ny Linux Mint dia misy bara eo ambany ary i Ubuntu dia manana izany amin'ny ilany havia ary eto dia mizara ny foko eo amin'ny maoderina (Unity) na ny mahazatra indrindra aho, saingy heveriko fa efa zatra izany aho ary Mijanona ao amin'ny Ubuntu aho.
Ireo rafitra miasa dia samy manana ny zava-drehetra ilaina mba hiasa hatramin'ny vao manomboka ny rafitra voalohany. Ny Ubuntu dia tsy manana programa napetraka aorin'izay misy, programa sasany izay miafara amin'ny fametrahana azy foana ary mahatonga ahy hieritreritra an'izany Ny fifantenana Linux Mint dia tsara kokoa. Ohatra iray ny mpilalao haino aman-jery VLC izay hita ao amin'ny Linux Mint fa tsy Ubuntu (na dia azo apetraka haingana miaraka amin'ny baiko sahaza azy aza).
Ankoatr'izany, Linux Mint dia manana ihany koa fampiharana kely toy ny MintAssistant, Mint Backup, MintDesktop, MintInstall, MintNanny na MintUpdate izay mety ho ilaina amin'ny fotoana sasany, saingy mbola tsy nampiasaiko mihitsy.
Na izany na tsy izany, somary misy fotony ihany koa io satria momba ny rindranasa izay mahasoa ahy; Ho an'ny mpampiasa hafa dia mety ho zava-dehibe ny tsy fahatongavan'ilay rafitra miaraka amina fampiharana be loatra, zavatra fantatra amin'ny hoe bloatware.
mpandresy: Linux Mint.
Famaranana: Linux Mint vs Ubuntu
Raha raisinay ny tahirin'ny lahatsoratra iray manontolo an'ny Linux Mint vs. Ubuntu, hitantsika fa ny safidy dia tsy tsotra loatra toa ny na eo aza ny zava-misy fa miavaka amin'ny fizarana manokana ny tsirairay.
Amin'ny teboka, manana fatorana isika. Raha mila manome ny fehin-kibo ho an'ny iray aho, izaho no filoha 😉 homeko an'i Ubuntu izany. Marina fa mahatsikaritra ny hafainganana ianao rehefa manokatra rindranasa sasany, saingy mahazo aina kokoa amin'ny lafiny rehetra aho. Raha nanandrana azy ireo ianao, iza amin'ireo no fidinao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » Birao hafa » Linux Mint vs. Ubuntu
Diego Habier dia hoy izy:
Mamaly an'i Диего Хабиер
Joaquin Valle Torres sary placeholder dia hoy izy:
Mijanona amin'ilay miasa ho an'io ekipa io, efa nitranga tamiko fa ny iray sy ny iray hafa dia tsy mitovy arakaraka ny ekipa, noho izany, raha mampiasa iray na iray hafa ianao, ary milamina tsara aminao ny zava-drehetra, ary azonao atao ny mampiasa ny pc, araka ny tokony ho izy, dia mijanona amin'izany.
Valiny tamin'i Joaquin Valle Torres
David alvarez dia hoy izy:
Valiny tamin'i David Alvarez
Hermes dia hoy izy:
Rehefa zatra mikorontana ianao dia sarotra be ny manova ny distro ubuntu. Ankehitriny dia tsy maintsy tadidintsika fa kely ny fanavaozana azy amin'ny kinova farany. Linux mint tiako kokoa amin'ny endriny debian satria manome antoka ny mint rehetra sy ny fahamarinan'ny debian lehibe izy
Valiny tamin'i Hermes
Duilio Gomez dia hoy izy:
Ubuntu dia tsara amin'ny fitaovako,
Valiny tamin'i Duilio E. Gomez
Lucas serey dia hoy izy:
Ubuntu efa taona vitsivitsy lasa izay. Tsy misy fahazarana sy vokatra tsara. Mint tmb tsara. Mandeha amin'ny tsiro izy io.
Valiny tamin'i Lucas Serrey
Michael Gutierrez dia hoy izy:
Eny Ubuntu. Satria tsy mailo amin'ny pc-ko i Mint, izay efa antitra be
Valiny tamin'i Miguel Gutierrez
emanuelnfs dia hoy izy:
Tsara ny hevitrao, ny fanehoan-kevitra koa, mifototra amin'izany rehetra izany, raha ny fahitana ny fampiasa sy ny hafainganana dia handeha ho any Mint miaraka amin'ny MATE aho, saingy mino mafy aho fa ilay rindrambaiko, ankoatry ny ilaina sy ny fanatanterahana ny asa, tokony ampitaina tsara amin'ny mpampiasa, ahoana? ny fanaovana interface tsara, intuitive, mora ampiasaina, lojika, misy saina, ohatra, ny menio manerantany an'ny Unity dia fahombiazana tanteraka, ny sasany hilaza fa kopian'ny OSX tanteraka izy io, saingy, iray ve izany raha tsy ny tsara indrindra fomba hitadiavana ny menio voatahy, mazava ho azy ao amin'ny Gnome dia nanapa-kevitra ny hametraka izany amin'ny bokotra hamburger izy ireo na miaraka amina sary famantarana, fa eo amin'ny birao dia tsy ilaintsika izany, ankoatry ny fananana habe azo kitihina amin'ny rantsan-tànana, maro amintsika no mampiasa ny PC na laptop Ho an'ny zavatra PC na Laptop dia mbola manana izany karazana mpampiasa izany isika, raha fintinina, ho ahy io teboka io sy ny haben'ny singa toy ny bokotra sy boaty dia ireo voalaza ao amin'ny Unity, manaja amin'ny loko, tsy izy ireo no voafidy tsara indrindra fa misy lohahevitra mandritra izany fotoana izany.
Valio i emanuelnfs
Tiako i Mint, ny hany lesoka dia ny tsy fananany programa nohavaozina, raha tsy izany dia tiako ny Kanelina. Mikasika ny fandaminana sy ny fanamorana ny fampiasana azy dia tsy raharahako izany satria amin'ny farany avelako amin'ny mac style daholo ireo desktops: baraingo ary hidina docky.
Ny firaisankina amin'ny solosaina findaiko taloha dia tsy afaka nampiasa azy aho, izao satria manana solo vaovao sy matanjaka kokoa aho dia nomeko fotoana ary ny tena marina dia tsy dia ratsy araka ny lazain'ny sasany, efa nampiasaiko vitsivitsy io. am-bolana ary tiako be ilay izy fa aleoko kanelina.
maivana kokoa ny mint fa araky ny filazan'izy ireo rehefa avy zatra bash dia sarotra ny mankany amin'ny mint
na dia samy tsara aza izy roa
alan guzman dia hoy izy:
Nahazo fitoniana tsara i Ubuntu tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Valiny tamin'i Alan Guzman
Enga anie izy ireo tsy hanao ny adala amin'ny mandeha plasma 5. Ny fandehanana manomboka amin'ny KDE4 mankany amin'ny plasma 5 dia avy amin'ny tontolo sary tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra ka hatramin'ny fampiasana ny iray amin'ireo mahazatra indrindra, fa amin'izy ireo no tsy marin-toerana indrindra.
Izany no antony nananganako ny tanako ho an'ny Mint KDE 🙂
Mustard Amadeus Pedro dia hoy izy:
Valiny an'i Mustard Amadeus Pedro
Gabriel Belmont EG dia hoy izy:
Valiny tamin'i Gabriel Belmont EG
Gad Creole dia hoy izy:
Hahahaha valiny mahaliana ny mpankafy ihany.
Valiny tamin'i Gad Criollo
Mint dia Ubuntu novaina
Grog dia hoy izy:
Ubuntu dia novaina Debian. 😉
Valiny tamin'i Grog
Tao amin'ny Little School izay niasako, niaraka tamin'ny masinina taloha, izay nanana Xp, dia nanandrana ny Linux Lite aho, izay toa tsy dia mampiasa loharano firy, taorian'ny nanandramako ny hafa, Linux Mint 17.3, satria tsy manana Internet ho azy ireo izahay, io no safidy tsara indrindra sy ny habetsaky ny tsiran'izy ireo. masinina kely, miaraka amin'ny ondrilahy 1 gig. Tena tiako izany ary miasa. Ny zavatra niainako manetriketrika, 10 cpu, miaraka amina monitor 15 crt.
Avy any Ubuntu aho, tiako kokoa amin'ny famolavolana sy ny fampiasa azy io. Saingy tsy maintsy ekena fa mora kokoa angamba ny LinuxMint ankehitriny ho an'ny mpampiasa vaovao ary, mazava ho azy, dia mitahiry asa betsaka aorian'ny fametrahana ny rafitra satria ny fonosana rindrambaiko default dia feno kokoa; saingy misy zavatra izay tsy maharesy lahatra ahy mihitsy, manomboka amin'ny endrika kanto (tena ilaina ilay miasa, mitandrema), hatramin'ny antsipiriany kely izay tsy azoko sorohina raha ampitahaina amin'i Ubuntu (fitantanana ambaratonga ny fiteny, ohatra) ary ao amin'ilay LinuxMint very eo amin'ny fijeriko. Tiako ny LinuxMint ary mandeha tsara izy, tsy maintsy ekeko fa, saingy mbola misy zavatra tsy ampy.
Caesar Waterlord dia hoy izy:
Linux Mint Debian tsy misy isalasalana. Miaraka amin'ny birao KDE kokoa
Valiny tamin'i Cesar Waterlord
Nametraka Mint imbetsaka aho ary voatery niverina tany Ubuntu. Miasa tsara kokoa ny zava-drehetra ao amin'ny Ubuntu. Betsaka ny fizarana miorina amin'ny Ubuntu izay manova ny endrik'ilay birao ihany. Raha tsy mandao an'i Ubuntu ianao dia afaka manao toy izany koa raha tsy miezaka mafy. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny classicmenu dia afaka miditra amin'ireo rindranasa toa ny Windows na Mint ianao. Ny fametrahana Docky na Cairo-dock dia manana dock toy ny OS X. Azonao atao ny manavao ireo mpamily sary Intel, misintona azy ireo avy amin'ny https://01.org/linuxgraphics/downloads. Betsaka ihany koa ireo rindranasa izay natao ho an'ny Ubuntu ihany, na dia azo apetraka amin'ny tsinjara hafa aza, tsy eo noho eo. Saingy ekipa ekipa matihanina natokana hitandrina sy hanatsara azy io i Ubuntu. Ny fanoloran-tena ho matihanina dia tsy mitovy amin'ny fialamboly.
Te-hanampy zavatra izay heveriko ho zava-dehibe aho. Ny fanaparitahana dia manome karazany maro kokoa; nefa tsy mahasoa an'iza na iza. Raha manana izay ilainao i Ubuntu, dia tsara kokoa ny mifikitra aminy toy izay mifamadika amin'ny Mint satria tianao kokoa ny lokon'ny birao. Ny antony dia ny antoka tsara indrindra fa tsy maty sy mihatsara i Ubuntu dia ny fitomboan'ny isan'ny mpampiasa. Miankina amin'ny mpijery izao ny fahitalavitra sy ny rafitra miasa. Io Ubuntu io dia manana mpampiasa an-tapitrisany maro manasoa antsika rehetra.
Jose Luis Lopez de Ciordia dia hoy izy:
Ny tena marina dia resaka filan'ny tena manokana izany; fa tsy izany ihany. Mandeha zavatra ara-teknika sy mivaingana kokoa, tsy tiako ny politikan'i Mint momba ny fanavaozana. Miaraka amin'ny Mint updater ianao dia miala fa tsy mametraka fanavaozana fiarovana maro izay mety ho zava-dehibe amin'ny filaminan'ny rafitra, izay sorohin'izy ireo noho ny "aza mandiso endrika na manapaka ny rafitra". Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny rafitra iray izay ny fotony, na dia mitovy amin'ny an'i Ubuntu aza, dia maniry ny hiova amin'ny fomba hafa io fotony io ... Tsy resy lahatra aho. Ary hitako ihany koa fa ny PPA sasany dia tsy mandeha tsara any Mint. Manana solosaina manokana aho izay tsy hay atao ny miasa ny Libreoffice PPA. Tsy manisa ireo olana sendra ahy tamin'ny fialana amin'ny hibernation (mbola tsy nahomby aho).
Valiny tamin'i Jose Luis López de Ciordia
Manaiky aho rehefa miresaka fanavaozana. Inona koa, amin'ny solosaina misy Ubuntu (na tsiro hafa, miankina amin'ny herinao) izay tantiko avy amin'ny fianakaviako sy ny namako, dia manamboatra ny fanavaozana mandeha ho azy ho azy ireo foana aho. Noho ny antony roa lehibe no anaovako azy:
1º Satria ny sasany (ankizy sy olona tsy manam-pahalalana kely na tsy manam-pahalalana) dia mpampiasa tsotra tsy mahazo alalana amin'ny fitantanan-draharaha. Tsy afaka mijery ny solosain'izy ireo isan'andro aho, noho izany dia tsara kokoa raha apetraka ho azy ny fanavaozana ny fiarovana.
2º Satria azoko antoka tanteraka fa ny ankamaroan'ny mpitantana dia tsy hanavao ny rafitra koa, farafaharatsiny mba ampiharina ho azy ny fanavaozana ny fiarovana.
Tsy resy lahatra tamin'io politikan'ny fanavaozana LinuxMint io aho, na hoe tsy afaka atao ho azy ireo, ny Mint updater ihany no mitady azy ireo fa tsy mametraka azy ireo.
Na izany na tsy izany, heveriko fa tsara kokoa i Ubuntu amin'io lafiny io.
Nisalasala aho, saingy taorian'ilay nolazainao dia resy lahatra ahy ianao. Tiako ny ekipako tsy diso fanantenana vaovao. Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra.
Taliesin LP dia hoy izy:
Mampiasa Ubuntu tsy misy fisalasalana aho, saingy mieritreritra aho fa resaka tsiro sy fahazarana (eny, halako koa ny firaisankina tamin'ny voalohany ary ankehitriny tsy afaka miaina tsy misy azy io aho). Raha ny fahasarotan'ny fitadiavana ireo rindranasa, dia nanandrana ny mari-pamantarana ClassicMenu ianao (classicmenu-famantarana) izay mamerina ny menio gnome2 mankany anaty lovia famantarana, ho an'ireo rindranasa izay tsy tadidinao izay nantsoiny na tsy tadidinao nametraka ...
Valio ny Taliesin LP
hasorr dia hoy izy:
Ubuntu mate, miaraka amin'ny bara etsy ambony ihany no ananako ao anaty atoma ary mandeha tsara izy. Ubuntu mate.
Mamaly an'i hathorr
Juan LG dia hoy izy:
Amin'izao fotoana izao ao amin'ny solosainako no nametrahako Ubuntu niaraka tamin'ny GNOME, miasa ho ahy izy io ary mahatonga ahy hiasa sy haingam-pandeha ho an'ny solosainako miaraka amina processeur 2-core, ny hany zavatra tsy maharesy lahatra ahy dia ny rafitry ny fampandrenesana, ny hafa rehetra dia tsara, Efa ela aho no tsy nanandrana an'i Ubuntu niaraka tamin'ny Unity ka tsy hitako izay nandrosoany ary tsy naharesy lahatra ahy ny Linux Mint nihoatra ny andro fitsapana vitsivitsy.
Valio amin'i Juan LG
districttuxDaniel dia hoy izy:
Mint na Ubuntu dia miankina amin'ny solosaina sy ny mpampiasa. Izay mety amin'ny olon-kafa dia mety tsy mety aminy. Etsy ankilany, manaitra fa ny Linux Mint no tena alaina ao anatin'ny 12 volana farany, ary ny Ubuntu dia afindra eo anelanelan'ny toerana 3 sy 4, eny fa na eo ambanin'ny OpenSUSE (distrowatch) aza
Mamaly an'i distritotuxDaniel
Hatreto dia mijanona miaraka amin'ny Ubuntu aho - Unty + compiz ary faly aho! 🙂 (Mazava aho, eo amin'ny andohalambo aho) fa mpampiasa ubuntu aho ary mpampiasa VERY faly 😉
Odracire dia hoy izy:
Nampiasa Ubuntu nandritra ny taona vitsivitsy aho, saingy hatramin'ny nanovako solosaina dia tsy nitsahatra nanana olana tamin'ny mpamily sasany aho. Indrindra miaraka amin'ny wifi. Tamin'ny herinandro lasa teo dia nametraka an'i Debian, Ubuntu, Elementary OS, ary Mint aho. Ubuntu irery no manome ahy olana amin'ny mpamily. Ny telo voazaha toetra hafa dia tonga lafatra fa i Debian no tena sarotiny indrindra tamin'ny fametrahana rindranasa maro ary ny Elementary OS dia toa tsara tarehy nefa tsy marin-toerana ary misy lesoka maro. Ny hitako dia Mint. Ity no farany napetrako ary amin'izao dia tena faly aho. Ny marina dia ny fampifanarahana, ny fahombiazana ary ny famolavolana dia tsy misy zavatra tokony hitsiriritra ireo teo aloha. Amin'izao fotoana izao, tsy misy fisalasalana, hifikitra amin'i Mint aho. Nametraka kinova 17.3 Cinnamont 64-bit aho
Mamaly an'i Odracir
Tantara Javi dia hoy izy:
TENA MANAIKY Izaho dia mpampiasa vaovao saingy mihoatra ny herintaona ao amin'ny GNU / Linux dia nanandrana ny tsiron'ny Ubuntu rehetra aho ary ny olana lehibe amiko dia ny fifanarahana amin'ireo mpamily, indrindra ny Wi-Fi, izay tsy misy olako amin'ny Linux Mint. Amin'izao fotoana izao dia mampiasa LinuxMint 18.3 Sylvia Xfce aho ary tena feno, milamina ary maivana. Ary farany, momba ilay rindrambaiko izay entin'i Mind's, dia feno kokoa noho i Ubuntu
PS: raha misy mpampiasa te-hanandrana fizarana GNU / Linux hanombohana eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia ampirisihiko hampiasa Linux Mint (Linux Mint Xfce ho an'ny solosaina loharano ambany).
Mamaly an'i JaviNovel
Nampiasa Ubuntu tamin'ny 9.04 ka hatramin'ny 14.04 aho. Hatramin'ny 12.04 Ubuntu dia distro saika tonga lafatra sy tsy azo vaky. Tao anatin'ny 6 taona dia tsy nila nametraka intsony aho, fa tamin'ny volana lasa, tsy maintsy "namerina nametraka" aho (tena namafa sy nametraka fisaratsarahana ho an'ny fametrahana madio ary mamela fisalasalana) fa nampihena izany, mety hitranga izany. Naharitra 3 herinandro izany ary tsy voavaha ny fikorontanan'ny kernel, nandany 2 andro nitety ny bilaogy, wiki ary forum aho. Efa nisy zavatra momba ny 14.04 izay tsy tiako fa niara-niasa tsara foana tamin'ny Ubuntu aho, nampihena izany. Raha fintinina dia hitako ny Linux Mint 17.2 Mate ary hatreto dia tsy manenina amin'ilay fanovana aho, na dia efa roa herinandro monja aza ary, mifototra amin'ny Ubuntu, dia azo ampiharina amiko. Ny tontolon'ny birao Mate dia manana tombony amin'ny fahafahany manamboatra ny zava-drehetra toy ny ao amin'ny Gnome 2 ary tsy manana olana amin'ireo tondro, zavatra izay tao amin'ny Gnome 3 no nataony, na dia azo vahana aza ny zava-drehetra dia tokony hazavaina.
Javier Hernandez - Crnl-Misero dia hoy izy:
Ubuntu Mate 16.04 !!!!! tsy mahalala fomba
Valiny tamin'i Javier Hernandez - Crnl-Misero
Carlos Perez dia hoy izy:
Vao avy nametraka ubuntu 16.4 tamin'ny solosaiko birao aho, andramako io saingy indrisy misy zavatra mitranga eo anelanelan'ny kinova ubuntu sy amd ity, indrisy fa ny processeur sy ny sary dia amd, hitako ny fahombiazana bebe kokoa amin'ny mint izay efa napetrakao amin'ny solosaina findainy, inona no tsy itovizany amin'ny endrika ivelany, na dia toa mahaliana aza ny firaisana, ny marina dia toa tsy mahafinaritra ny mivezivezy amin'ny alalany, dia toy ny fampiasana windows 8 izay karma ho ahy io. Manana famolavolana bara 2 amin'ny mint aho, 1 eo an-tampony ho an'ny programa tsy misy fampiasa ary ny iray ambany ho an'ny fampandrenesana sy ny fikandrana mavitrika, izay no fomba nanamboarako azy manokana ary tiako kokoa, dia toy ny manana filaminana bebe kokoa.
Ny hevitro dia ny fampiasanao izay tianao indrindra, fa tohizako amin'ny kanelina mint, tsiro fotsiny ireny. Ary ny momba ny programa sy ny fanavaozana, heveriko fa mitovy izy ireo, na mandeha ho azy na tsia.
Mamaly an'i carlos perez
Lapan'i Bombay dia hoy izy:
efa elaela io, fa nanandrana ny Ubuntu MATE 16.04 LTS aho ary tsara be izany!
Valiny ho an'ny lapan'i Bombay
Nampiasa Ubuntu foana aho, indrindra ny Xubuntu, Lubuntu ary LXLE, ary volana vitsivitsy lasa izay dia nifindra tany amin'ny Linux Mint aho ary tsy manenina amin'ilay fanovana mihitsy aho, heveriko fa tena sarotra ny hanomezana fotoana indray an'i Ubuntu indray andro any.
appleyandroidfanboyja dia hoy izy:
Mamaly an'i appleyandroidfanboyja
Johnny Melavo dia hoy izy:
hahahahaha, ahoana no itiavanao ny ho avy nokapohina, eh Alejandro?
Valiny tamin'i Jhonny Melavo
Jaime Ruiz dia hoy izy:
Efa ela aho no nanandrana ny Linux Mint, teo amin'ny birao, ary amin'ny solosaina finday roa ary tena mandeha amiko izany, tsy manana ny fampisehoana antenaiko ny Libre Office, saingy olana hafa izany ... Mbola liana te hahafantatra ihany aho hanandrana ny UBUNTU.
Valiny tamin'i Jaime Ruiz
Asehoy amin'ny alàlan'ny fihotsahan'ny tany ho antsika izay avy amin'ny Windows. Ubuntu Nasiako azy ary nesoriko tamin'io ihany: ratsy tarehy, miadana, tsy tiako mihitsy.
Manana Mint aho saika ho an'ny zava-drehetra ary Windows 10 ho an'ny lalao.
Pierre Aribaut dia hoy izy:
Linux Mint 18.2 (ankehitriny 18.3) miaraka amin'ny kanelina mandritra ny 6 volana, rehefa avy amin'ny Windows 7 na taloha ianao dia tonga lafatra, mora ampiasaina ary milamina tokoa 🙂
Valiny tamin'i Pierre Aribaut
Mijanona miaraka amin'ny gmac miorina amin'ny ubuntu aho ... manana solosaina finday 7 taona aho ary miasa tsara ... ary na dia tsy notohizana intsony aza ny gmac dia mbola mandray hatrany ny fanavaozana ny ubuntu ary manana azy amin'ny 16.04
MINT REHETRA FIAINANA, UBUNTU amin'ny dell XPS 501LX nianjera, miasa toa ortho ary mamela ny teny. Olana hatrany, raha tena mora ny mametraka fonosana dia io ihany no hitako miabo kokoa noho ny distro hafa.
Ny hany zavatra hilazana ny marina ary tsy tena mpankafy linux aho
Firenena Nelson dia hoy izy:
Nandritra ny 5 taona dia nametraka tamin'ny kapila samihafa aho ary farany manana ny Mint ho tiako indrindra, izay ampiasako default. Rehefa tsy tiako ny firaisankina dia nanandrana an'i Mint aho ary lasa tiako indrindra-
Valiny tamin'i Nelson Pais
TheGenius47 dia hoy izy:
ho an'ny ubuntu-ko satria ny linux mint dia mampatsiahy ahy ny windows 2000
Valiny amin'i TheGenius47
Ny mahasosotra ahy momba an'i Mint dia hoe raha misy fanapahana herinaratra na manantona azy noho ny antony sasany ary mila manao fiatoana mahery vaika ianao dia mandeha tanteraka ny boot grub anao ary sarotra be ny mivoaka amin'ny initrams, miaraka amin'ny xubuntu dia tsy aorian'izay, ho ahy manokana, aleoko xubuntu xfce + cairo dock + lohahevitra arc + sary masina ..
Win10 + VisualStudio + Corel2018 + VisualNEO, arahaba
vatan-kazo dia hoy izy:
Linux Mint no tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra!
Na aiza na aiza no misy ilay maitso maitso tsara tarehy, avelao ny ocher ratsy tarehy any an'efitra ...
Mamaly an'i Tronchatrenes
sifotra dia hoy izy:
Mint 18 miaraka amin'ny kanelina.
Valiny amin'ny caracole
willo santos dia hoy izy:
Manaraka ny famongorana ny premium windows 7 an-trano avy amin'ny solosaina finday mini acer satria miadana izy, mieritreritra aho fa hisafidy MINT satria mbola miadana ny ubuntu version 18.
Mamaly an'i wilo santos
Mieritreritra ny ubuntu amin'ny kanelina aho, saingy nijanona efa ela aho ary niverina tany debian.
Tato ho ato dia mizaha toetra an'i Deepin aho ary tiako be izany.
Mpampianatra aho ary napetraka tao amin'ny solosainan'ny mpianatra ESO boribory voalohany i Ubuntu. Fanaintainana amin'ny boriky.
Nanandrana ny Linux Mint izahay ary niova ny zava-drehetra. Tsara kokoa. Tsy fantatro hoe iza no ho tsara kokoa, fa, ho an'ny vao manomboka Linux Mint, tsy misy fisalasalana amin'ny fanamorana fampiasana. Miaraka amin'ny LibreOffice, Chromium ary VLC dia afaka manao izay saika ataonao amin'ny solo-sainao ianao.
Sary momba ny toerana misy anao Jose Maria Amador dia hoy izy:
Salama, tiako ve ilay OS roa nataoko? , Mora manana kapila mafy roa ao amin'ny tilikambo aho, ao amin'ny iray manana Ubuntu ary amin'ny iray hafa manana Linux aho, nesoriko ny fonony avy tao amin'ny tilikambo hidirana fa disk iray fotsiny no mifandray amin'ny tabilao, rehefa te-hiara-boot miaraka amin'ny ilay OS hafa dia esoriko ny iray ary ampifandraiso ny iray hafa.
Tokony ho 20 na 25 taona lasa izay dia nametraka rafitra roa tamina kapila tokana aho, Wuindows sy Ubuntu, nanao fizarana roa aho ary tonga lafatra nefa rehefa tsy maintsy nanavao aho dia tokony hitandrina rehefa manomboka indray.
Taorian'izay dia nanapa-kevitra ny handao Wuindows aho ary hametraka kapila roa, ny iray miaraka amin'i Ubuntu ary ny iray kosa amin'ny Linux.
Ary raha sarotra ny milaza hoe iza no tsara dia izany no antony anananako roa tonta.
Valiny tamin'i Jose Maria Amador
Ivan Sanchez - Arzantina - dia hoy izy:
Tiako manokana ny Mint, na dia mieritreritra aza aho fa misy teboka marobe hamakafaka, marihiko fa amin'ny tena manan-danja indrindra Mint dia mandray ny voninahitra. Rehefa manantona i Ubuntu dia miha miadana izy ary noho izany dia very filaminana. Ny Mint dia nahavita namorona tsiranoka lehibe kokoa izay ahazoana aina kokoa hiasa.
Ny fialana kely ny romantisma noho ny nandany fotoana be dia be tamin'ny Ubuntu sy ny interface estetika kokoa, ny faharetany dia tsy mahatonga azy hahafinaritra ary rehefa miasa na mankafy fotsiny ny solosaina dia manjary mavesatra io teboka ratsy io. Heveriko fa ny rafitra iray misy tontolo iainana fototra sy maivana dia mahomby kokoa noho ny sary sy ny vokany tsara kokoa miaraka amin'ny fianjerana.
Mint… andao hiroso!
Valiny tamin'i Iván Sanchez - Arzantina -
Tiako kokoa ny ubuntu fa raha ampianay elementososy dia mitazona fanabeazana fototra aho
Obed medina dia hoy izy:
Tena manetri-tena aho mila manome ny fanohanako an'i LINUX MINT 17.3 MATE, amin'ireo distro linux marobe izay efa nanandramako, io no tsotra indrindra, haingana indrindra, mora indrindra ary azo antoka. Miara-miasa amin'ny solosaina finday mini, CPU taloha ary exo rehetra aho; Raha ny marina dia manana DIGITECA mihazakazaka sy mivelatra aho ary tena be dia be miaraka amin'ny router routerys sy 5.6 amin'ny solosaina 21 ao amin'ny foibe CBIT ...
Manaja ny hevitra sy ny zavatra iainana hafa ... Manohana sy mampiroborobo ny MINT aho
Valiny tamin'i Obed Medina
Lavitra an'i Linux Mint ho an'ny tsiroko. Nampiasa ny LM tamina netbook foana aho ary tiako izany. Nividy birao birao iray niaraka tamin'ny ondrilahy I9, 16 gb, 500 gb mafy ary 2tb mahazatra aho. Hoy aho taloha kelin'izay, mandefa anao Ubuntu 18.04 aho ary hanomboka hampiasa azy io. Nandany ahy foana ny olan'ny Bluetooth izay tapaka, ny wifi tapaka na tsy mandeha amin'ny hafainganana tokony hizorany ary olana maro hafa. Tahaka ireo olana rehetra nipoitra dia nomeko fotoana izy. Indray andro, nanambara ny LTS 20.04 izy ireo ary hoy aho hoe, havaoziko izy ity raha hihatsara. Ny fanafody dia ratsy noho ny aretina ary leo aho. Apetrako eo amin'ny birao ny solila ary tonga lafatra ny zava-drehetra ary misy fitaovana maro hafa. Tiako ny mint. !!!! Miarahaba antsika rehetra.
Miadana i Ubuntu. Isaky ny nametraka azy aho dia nanana an'io. Toa tsy anisan'ny laharam-pahamehan'ny Canonical izy io, fa tiako fotsiny ho maivana ny rafitra hizara ny loharanon-kevitry ny solosainako amin'ny programa sy lalao. Avy eo voafidy ny fomba fijery (misy Mint Mate, Mint xfce, mint cinnamont, sns ary mitovy amin'ny Ubuntu). Tsy manamafy ny fampidirana azy ho ampahany amin'ny fanombanana. Heveriko fa tsara ny Ubuntu raha toa ianao ka karazan'olona tsy mampaninona ny mandany vola na manana azy ireo hitsitsy. Mbola misy antony tokony hisafidiananao ny Linux Mint.
Ohnegrund dia hoy izy:
Mifikitra amin'ny Linux Mint aho, mifanentana amiko tanteraka amin'ny PC ananako ary milamina kokoa noho ny Ubuntu. Ny olana ara-piarovana ihany no iahiako satria nilaza izy ireo fa tsy manasongadina an'io olana io ny Mint fa efa raharaha iray amin'ny fikarakaran'izy ireo tsirairay avy.
Mamaly an'i OhneGrund
Tapitra nandeha tany amin'ny Mint izy ary tsy manenina aho na oviana na oviana nanao izany.
Fampahalalana maimaim-poana dia hoy izy:
Ity rakitra ity dia alao ny installer sy ny parametrer Linux Mint: https://infolib.re
Valio amin'i InfoLibre
lahatsoratra intéressant, merci!
lahatsoratra intéressant, merci
Roa andro lasa izay dia nametraka ubuntu 20 tao amin'ny macbook 2008 4.1 aho niaraka tamin'ny 2gb ram, 2,4ghz ary 240gb SSD, toa tsara izany ary izany rehetra izany saingy mbola tsy nampiasa distro linux mihitsy aho ary te-hamono linux… Nanandrana ny Linux mint aho noho ny fahalianana ary nahita tamim-pifaliana lehibe, (tsy fantatro na ao amin'ny Ubuntu koa) fa azoko atao ny manana ny HOT CORNERS malalako izay ampiasaiko betsaka amin'ny OSX, ho an'ity sy ny tsotra ihany amin'ny ankapobeny, hijanona miaraka amin'i Mint mandritra ny fotoana fohy aho, amin'izay ianarako kely momba ny tontolon'ny linux, narary an-doha aho fa nanana fifandraisana Wi-Fi saingy tsy nanana data ...... mandra-pahatongan'ny Nesoriko ny mpamily generika, nodioviko ireo rakitra ary namboariko ilay mety ho an'ny broadcom-ko
ho an'ny MINT-ko !!!!
Hector T. Chávez Valencia dia hoy izy:
andro tena tsara. Manana Windows 10 aho, amin'ny solosaina finday Samsung RV420. Te-hametraka ny Ubuntu Budgie aho. Manontany aho, azoko atao ve ny mametraka azy amin'ny fizarazarana hafa, misaraka amin'ny Windows 10?
Afaka mandefa mailaka avy amin'ny Ubuntu Budgie ve aho Windows 10 tsy misy olana?
Afaka miditra amin'ny tambajotra sosialy rehetra tsy misy olana ve aho?
Ny hevitrao, misaotra
Valiny an'i Héctor T. Chávez Valencia
Magic Wormhole, mandefasa rakitra soa aman-tsara ao amin'ny terminal
Ahoana ny fametrahana an'i Manokwari amin'ny Ubuntu 16.04